Samsung Knox गोपनीयता नीति
पछिल्लोपटक अद्यावधिक गरिएको मितिः नोभेम्बर 6, 2020
Samsung Electronics Co., Ltd. मा हाम्रा ग्राहकहरूको लागि गोपनीयता कत्तिको महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ । तपाईंले हामीले तपाईंको व्यक्तिगत जानकारी कसरी संकलन र प्रयोग गर्छौं भन्ने कुरा बुझ्नुहुन्छ भनी सुनिश्चित गर्नको लागि हामीले यो Knox गोपनीयता नीति तयार पारेका छौं ।
https://account.samsung.com/membership/terms/privacypolicy मा भएको हाम्रो गोपनीयता नीति तपाईंको Knox को प्रयोगमा पनि लागू हुन्छ । हाम्रो गोपनीयता नीतिमा हामीले तपाईंको डाटा कसरी प्रयोग गर्छौं भन्ने बारेमा थप जानकारी समावेश गरिएको छ । यसमा हामीलाई कसरी सम्पर्क गर्ने भन्ने बारे जानकारी पनि समावेश छ । कृपया हाम्रो गोपनीयता नीतिका साथै यो Samsung Knox गोपनीयता नीति पनि पढ्नुहोस् । यद्यपि, हामी Knox को लागि तपाईंको जानकारी कसरी प्रयोग गर्छौं भन्ने कुराको सम्बन्धमा यो Samsung Knox गोपनीयता नीति यो गोपनीयता नीतिभन्दा जहिले पनि प्रबल हुनेछ ।
हामीले के-कस्ता जानकारी संकलन गर्छौं ?
Samsung Knox बाट, हामीले विभिन्न तरिकाबाट तपाईंको बारेमा जानकारी प्राप्त गरेर व्यवस्थित गर्छौं ।
तपाईंको Knox को प्रयोग बारे जानकारी
हामी तपाईंका Knox सक्षम गरिएका यन्त्रहरू र अन्य माध्यमहरूमा रहेका सफ्टवेयर मार्फत तपाईंको Knox को प्रयोगको बारेमा जानकारी संकलन गर्नेछौँ । हामीले निम्न कुरा संकलन गर्नेछौं:
• यन्त्र र एप जानकारी, जस्तै यन्त्र परिचायकहरू र अन्य अदि्वतीय परिचायकहरू, यन्त्रको सफ्टवेयर संस्करण, OS संस्करण, यन्त्र मोडेलहरू, अनुप्रयोग प्याकेजको नाम, अनुप्रयोग प्याकेजको संस्करण र अनुप्रयोगको ह्याश डाटा ।
• तपाईंले आफ्ना यन्त्रहरू र Knox को प्रयोग कहिले र कति पटक गर्नुहुन्छ भन्ने सहित Knox को तपाईंको प्रयोग बारे जानकारी । तपाईंले Knox सँग अन्तरक्रिया गर्दा Samsung का सर्भरहरूले जानकारी प्राप्त गर्नेछन्, जस्तै तपाईंको Knox को प्रयोग र Knox सँगको तपाईंका अन्तरक्रियाहरू बारे जानकारी ।
• तपाईंसँगको अलग सहमतिमा, Knox मा हुने त्रुटिहरूको पहिचान र निदान गर्न अनुप्रयोग लगहरू । हामी अलग सहमतिमा संकलन र प्रयोग गरिएका डाटाका किसिमहरू बारे थप विस्तृतमा व्याख्या गर्नेछौं ।
हामीले संकलन गरेको समयमा तपाईंलाई वर्णन गरे अनुसार वा अन्यथा तपाईंको सहमतिमा पनि तपाईं, तपाईंको यन्त्र र एप्स र तपाईंको Knox को प्रयोग बारे अन्य जानकारी संकलन गर्न सक्छौं ।
हामी तपाईंको जानकारी कसरी प्रयोग गर्छौं ?
हामीले संकलन गरेको जानकारीलाई निम्न प्रयोजनहरूका लागि प्रयोग गर्छौं:
• Knox सक्रियताका लागि तपाईं वा तपाईंको यन्त्रलाई दर्ता र प्रमाणित गर्न र Knox का इजाजतपत्रहरूको व्यवस्थापन गर्न;
• Knox का फ्रेमवर्क र यसका सुविधा तथा सेवाहरू उपलब्ध गराउन;
• Knox मार्फत र यसका बारेमा गरिएका अनुरोध, सोधपूछ र निर्देशनहरूको प्रतिक्रिया जनाउन;
• हाम्रो व्यवसाय सञ्चालन, मूल्याङ्कन र सुधार गर्ने (नयाँ उत्पादनहरू विकास गर्ने; हाम्रा उत्पादन र सेवाहरूको वृद्धि र सुधार गर्ने; हाम्रा सञ्चारहरूलाई व्यवस्थित गर्ने; हाम्रा उत्पादन, ग्राहक आधार र सेवाहरूको विश्लेषण गर्ने; बजार अनुसन्धान सञ्चालन गर्ने; विश्लेषणात्मक डाटा सम्पादन गर्ने; र लेखा, लेखापरीक्षण र अन्य आन्तरिक प्रकार्यहरू सम्पादन गर्ने सहित);
• तपाईंलाई सान्दर्भिक सञ्चार, सेवा र अनुभवहरू प्रदान गर्नका लागि हामीलाई हाम्रा ग्राहकहरू अझ राम्रोसँग बुझ्नमा मद्दत गर्नको लागि हाम्रा उत्पादन र सेवाहरू विश्लेषण गर्न ।
• Knox को लागि सफ्टवेयरका अद्यावधिक, मर्मत सेवा र सहायता उपलब्ध गराउन ।
• यस Samsung Knox गोपनीयता नीति र गोपनीयता नीति सहित उचित कानूनी आवश्यकता, सम्बद्ध उद्योग मानदण्ड र हाम्रा नीतिहरूसँग अनुपालन गर्न र लागू गर्न।
• Samsung Electronics वा हाम्रा कुनै पनि सम्बद्ध कम्पनी, व्यावसायिक साझेदार वा ग्राहकहरूको अधिकार, सम्पत्ति वा सुरक्षाको संरक्षण गर्न ।
हामी तपाईंको जानकारी कोसँग साझा गर्छौं ?
हामी तपाईंको जानकारी आन्तरिक रूपमा हाम्रो व्यवसायभित्र र निम्न निकायहरूसँग खुलासा गर्नेछौँ, तर माथि वर्णन गरिएको प्रयोजनका लागि मात्र ।
• सहायक कम्पनीहरू: हाम्रो नियन्त्रण वा स्वामित्व अन्तर्गत रहेका अन्य Samsung Electronics समूहका कम्पनीहरू;
• व्यावसायिक साझेदारहरू: तपाईंलाई Samsung Knox उपलब्ध गराउनका लागि हामीसँगै एकसाथ काम गर्ने साझेदारहरू । यी व्यावसायिक साझेदारहरूले तपाईंको व्यक्तिगत जानकारी नियन्त्रण र व्यवस्थित गर्छन्;
• सेवा प्रदायकहरू: हाम्रो लागि वा हाम्रो तर्फबाट सेवाहरू उपलब्ध गराउने ध्यानपूर्वक चयन गरिएका कम्पनीहरू, जस्तै हाम्रो तर्फबाट डाटा व्यवस्थित गर्ने क्लाउड प्लेटफार्म प्रदायकहरू । यी प्रदायकहरू पनि तपाईंको जानकारी सुरक्षा राख्नमा समर्पित छन् ।
• कानूनले मागेका वा तपाईंको Knox को सुरक्षा गर्नको लागि आवश्यक अन्य पक्षहरूः उदाहरणका लागि, कानून, कानुनी प्रक्रिया वा सरकारी निकायहरूबाट अदालतको आदेश बमोजिम तपाईंको जानकारी खुलासा गर्नुपर्ने हुन सक्छ । उनीहरूले कानून लागू गर्ने, राष्ट्रिय सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी, वा सार्वजनिक सुरक्षाका अन्य सवालहरूसँग सम्बन्धित प्रयोजनका लागि हामीबाट तपाईंको जानकारी माग्न सक्नेछन्;
• संस्थागत कारोबारहरूसँग सम्बन्धित अन्य पक्षहरू: हामी गाभ्ने/गाभिने वा स्थानान्तरण, प्राप्ति वा बिक्री वा दिवालियापनको मामिलामा कुनै तेस्रो पक्षसँग तपाईंको जानकारी खुलासा गर्न सक्छौँ; र
• तपाईंको सहमति वा तपाईंको निर्देशन बमोजिम अन्य पक्षहरू: यस Samsung Knox गोपनीयता नीतिमा व्याख्या गरिएका खुलासाहरूका साथसाथै, तपाईंले साझा गर्न छुट्टै सहमति जनाएमा वा अनुरोध गर्नुभएमा पनि हामी अन्य तेस्रो पक्षहरूसँग तपाईंको बारेमा जानकारी साझा गर्न सक्नेछौँ ।
यस SAMSUNG KNOX गोपनीयता नीतिका अद्यावधिकहरू
हामीले Knox मा भएका तपाईंका जानकारी कसरी संकलन गर्छौं र प्रशोधन गर्छौँ भन्ने विषयमा भएका परिवर्तनहरू वा सम्बन्धित कानूनहरूमा भएका परिवर्तनहरू बारे तपाईंलाई थाहा दिनको लागि यस Samsung Knox गोपनीयता नीति अद्यावधिक गर्न सकिने छ । दस्तावेज पछिल्लो पटक अद्यावधिक गरिएको मिति यस Samsung Knox गोपनीयता नीतिको शीर्ष भागमा उल्लेख गरिएको हुनेछ ।